Global Voices teny Malagasy » Diantsika Ao Amin’ny Tontolon’ny Bilaogy Kiorda · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Novambra 2017 3:57 GMT 1	 · Mpanoratra Deborah Ann Dilley Nandika Miranah
Nanamarika ny fiantombohan'ny fitsarana an'i Saddam Hussein  ity herinandro ity, tsy vitany hoe tsy mbola nisy toy izany ity fitsarana ity, fa ny fanontaniana mitoetra dia hoe: hotsaraina tokoa tamin'ny habibiana rehetra lazaina fa vitany ve izy? Lafiny iray hafa mahaliana amin'ity fitsarana ity ny hoe Kiorda ny mpitsara voalohany tamin'ity raharaha ity, izay fandresena mamy ho an'ireo vahoaka Kiorda. Hiwa avy ao amin'ny Hiwa Hopes manome lahatsoratra mampihetsi-po momba ny antony maha-zava-dehibe ny fisehoan'ity raharaha ity, ary manome antsipiriany ho antsika momba ny fahatsiarovana nentiny tamin'izy fony tanora ary nofaizin'i Saddam. 
Mazava ho azy, rehefa misy ny fanombantombanana izay naha tompon'andraikitra na tsia an'i Saddam, miverina indray ny olana momba an'i Iran “ny manaraka ao amin'ny lisitra” raha tompon'andraikitra na tsia i Iran tamin'ny zavatra lazaina fa nataon'i Saddam. Ao amin'ny Kurdistan Bloggers Union, misy ny adihevitra mahaliana amin'ny hoe iza no tompon'andraikitra tamin'ny famelezana tamin'ny etona ny Kiorda ao Halapja , ny sasany amin'ny mpanao tsikera kosa nanonona an'i Iran no tompon'antoka tamin'ny raharaha, raha matetika ny fitondrana Irakiana no tondroina tompon'andraikitra tamin'izany. Vladimir avy ao amin'ny From Holland to Kurdistan manontany raha mihatra amin'i Iran tahaka ny mahazo an'i Iraka ihany koa ny loza tahaka izany sy raha rava koa ny fitondrany.  Miresaka momba an'i Iran ihany, nisy koa ny fitsidihana ny tantara fampijalian'ny Iraniana ny Kiorda , manome fomba fijery tsara momba ny hetsika nataon'i Iran tamin'ny Kiorda ao Kiordistan atsinanana ny bilaogy Land of the Sun.
Vao haingana, nisy ny fihanaky ny herisetra tao amin'ireo faritra milamina teo aloha tao avaratr'i Iraka / atsimon'i Kurdistan  izay niteraka ahiahy ho an'ny Kiorda tao amin'io faritra io. Indrindra fa misy ny tsaho milaza fa misy ifandraisany sy nohamafisin'ny Sonita ao Iraka ny herisetra .
Olana hafa atrehin'ny Kiorda ao Iraka ny ho endrika ara-politikan'ny firenena iray vaovao. Nolaniana vao haingana ny lalàmpanorenana Irakiana , saingy tsy midika izany fa azo antoka ny fahamarinan-toeran'i Iràka. Nanomboka nilaza ireo Kiorda mpitsikera fa be dia be loatra ny fileferana Kiorda tamin'ny famolavolàna ny lalàmpanorenana vaovao , niombo-kevitra tamin'ny filoha Amerikana George Bush kosa ny sasany fa mila miray hina ny antoko politika Kiorda hahombiazana .
Tsy i Iraka sy i Iran ihany no firenena tokana noresahan'ny Kiorda tamin'ity herinandro ity. Nojinery ihany koa i Torkia tsy tamin'ny fanokafana ny resaka tamin'ny Vondrona Eoropeana tamin'ny fomba ofisialy ihany fa tamin'ny fanohanan'ny olom-pirenena ny famonoana olona noho ny fiarovam-boninahitra ihany koa . Fanampin'izany, tamin'ity herinandro ity, nisy ihany koa ny vaovao momba ny tati-baovaon'ny Reporters without Borders momba ny tsy fisian'ny fahalalahan'ny gazety ao Torkia .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/11/28/110744/
 fiantombohan'ny fitsarana an'i Saddam Hussein: http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L24130550.htm
 manome antsipiriany ho antsika momba ny fahatsiarovana nentiny tamin'izy fony tanora ary nofaizin'i Saddam.: http://hiwakan.blogspot.com/2005/10/hiwakanone-is-underway.html
 tompon'andraikitra tamin'ny famelezana tamin'ny etona ny Kiorda ao Halapja: http://kurdistanblog.blogspot.com/2005/10/this-steams-me.html
 mihatra amin'i Iran tahaka ny mahazo an'i Iraka ihany koa ny loza tahaka izany sy raha rava koa ny fitondrany.: http://vladimirkurdistan.blogspot.com/2005/10/will-iran-share-same-future-as-saddams.html
 tantara fampijalian'ny Iraniana ny Kiorda: http://vladimirkurdistan.blogspot.com/2005/10/again-oppression-in-iran.html
 hetsika nataon'i Iran tamin'ny Kiorda ao Kiordistan atsinanana : http://landofthesunkurdistan.blogspot.com/2005/10/freedom-invasion-iran.html
 ny fihanaky ny herisetra tao amin'ireo faritra milamina teo aloha tao avaratr'i Iraka / atsimon'i Kurdistan: http://kurdistanblog.blogspot.com/2005/10/suicide-attack-in-kurdish-safe-haven-9.html
 misy ifandraisany sy nohamafisin'ny Sonita ao Iraka ny herisetra : http://vladimirkurdistan.blogspot.com/2005/10/some-sunni-arabs-justify-slaughter-of.html
 Nolaniana vao haingana ny lalàmpanorenana Irakiana: http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4377914.stm
 be dia be loatra ny fileferana Kiorda tamin'ny famolavolàna ny lalàmpanorenana vaovao: http://northerniraq.info/forums/viewtopic.php?t=853
 mila miray hina ny antoko politika Kiorda hahombiazana: http://vladimirkurdistan.blogspot.com/2005/10/bush-tells-barzani-to-unite-kurdish.html
 Koerdistan : http://koerdistan.blogspot.com/
 tsy tamin'ny fanokafana ny resaka tamin'ny Vondrona Eoropeana : http://hiwakan.blogspot.com/2005/10/turkey-is-fully-ready-for-eu.html
 tati-baovaon'ny Reporters without Borders momba ny tsy fisian'ny fahalalahan'ny gazety ao Torkia: http://http://vladimirkurdistan.blogspot.com/2005/10/turkey-slow-reform-process-for-press.html